स्वास्थ्य/जीवनशैली - Sagarmatha TV
काठमाडौं– कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरुको उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट काठमाडौं ल्याइएको छ । नेपाल एयरलाइन्सको हवाईजहाज चीनबाट आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याएकार आइतबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो । नेपाल एयरलाइन्सका अनुसार चीन गएको जहाज आइतबार बिहान साढे पाँच बजे अवतरण गरेको हो । कोरोना परीक्षण किट, स्वास्थ्यकर्मीहरुले सुरक्षाका लागि लगाउने विशेष प्रकारको […]
दैलेख- ‘तपाईहरु कोही विरामी हुनुहुन्छ भने हामीलाई एककल फोन गर्नुहोस, हामी तपाईहरुको उपचारका लागि घरमै आउँछौं ।’ विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको (कोभिड –१९) कोरोना भाइरस फैलिन नदिन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाको एम्बुलेन्सको नम्बर सार्वजनिक गर्दै यस्तो सूचना जारी गरेको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण कतै नफैलियोस र कोही पनि सङ्क्रमित नहोस् भन्नका लागि जिल्ला […]
चितवनको कोरोना विषेश अस्पतालमा उपचाररत एकजनाको मृत्यु
चितवन । रुघाखोकीसँगै उच्च ज्वरो आएपछि चितवनको भरतपुरस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा भर्ना भएका एक बिरामीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा पर्साको वीरगन्ज घर भएका ३० वर्षीय युवक चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत थिए । तर उनलाइ उच्च ज्वरो र रूघाखोकी देखिएपछि कोरोना संक्रमणको आशंकामा केही दिन अगाडि कोरोना विशेष अस्पतालमा रेफर गरी आइसोलेसन वार्डमा राखिएको […]
कोरोना भाइरस: मानिस अनुहार नछोईकन किन बस्न सक्दैनन्?
मानवलाई अन्य जीवभन्दा भिन्न देखाउने गुणमा अनुहार छुने स्वभाव पनि हो। आफूले थाहै नपाई अनुहार छोइराख्ने स्वभाव भएको सम्भवत: हामी एकमात्र प्रजाति हौँ। त्यो स्वभावले कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) जस्ता रोग फैलाउन सघाउँछ। हामी किन यस्तो गर्छौँ र हामीले यस्तो स्वभाव कसरी हटाउन सकिन्छ ? हाम्रो बानी कस्तो छ? हामीले बारम्बार आफ्नो अनुहार छोइराखेका हुन्छौँ। सन् २०१५ […]
कोरोनाको संक्रमण : नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारमा पहिलो एकको मृत्यु
काठमाडौं । नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्य बिहारमा कोरोनाको संक्रमणबाट पहिलो एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । बिहार राज्यमा दुईजना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् । ती व्यक्ति कतारबाट फर्किएको बीबीसीले जनाएकमो छ । उनको मृत्यु शनिबार भएको थियो र पछि प्राप्त रिपोर्टमा उनमा कोरोनाभाइरस पोजेटीभ देखिएको बताइएको छ। नेपालको प्रदेश १, प्रदेश २ बागमती […]
कोरोना भाइरस : शरीर बाहिर कति बाँच्छ?
काठमाडौं । जति कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिइरहेको छ, त्यति नै विभिन्न वस्तुको सतहहरूसँग हाम्रो डर पनि बढिरहेको छ। संसारभर मानिसहरूले नयाँ अभ्यास शुरू गरेको देख्न सकिन्छ। यस्ता अभ्यासमा कुहिनोले ढोका खोल्ने, बस वा रेलमा कतै नसमाई उभिने र कार्यालयमा बिहान आफ्नो टेबुल सफा गर्ने छन्। कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण धेरै भएका स्थानमा शरीर छोप्ने कपडा लगाएका मानिसहरूले खेलस्थल […]
मणिपाल शिक्षण क्याम्पसमा १५० शैयाको क्वारेन्टाइन बनाइँदै
काठमाडौं। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणकालागि मणिपाल शिक्षण क्याम्पसको भवनमा ‘क्वारेन्टाइन’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१३ स्थित भवनको जनकपुरधाम उपहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहसहितका सुरक्षा निकायका प्रमुख र विज्ञको टोलीले सो प्रयोजनका लागि टोलीले उपयुक्त ठहर गरेको हो । भवनमा १५० जनासम्म राख्न सकिने गरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । जाँचका क्रममा […]
कोरोना भाइरसबिरुद्ध लड्न डब्लूएचओका ५ उपाय
काठमाडौं – कोरानो भाइरस(कोभिड -१९) ले विश्व आक्रान्त छ । संसारभर महामारी फैलिरहँदा यसबाट बच्न अनेकौं उपायको खोजिहरु भइरहेका छन् । मानिसहरुको जनजीवन अस्तव्यस्त भएका छन् । मानव जीवनकै अस्तित्व संकटमा पार्न खोजिरहेको यस भाइरबाट बच्न डब्लूएचओले व्यक्तिगत तवरबाट गर्न सकिने केही सुझाव दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले शुक्रबार राती गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा […]
यूवा पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्ः डब्लूएचओ
काठमाडौं। डब्लूएचओले बालबालिका र बृद्धबृद्धा मात्र नभएर युवाहरु पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले सचेत रहन चेतावनी दिएको छ । डब्लूएचओले जथाभावी हिँडडुल नगर्न आग्रह गर्दैै बालबालिका तथा पाका व्यक्तिसँग घुलमिल नगर्न युवाहरुलाई सुझाव दिएको छ । कोरोना भाइरसबाट वृद्धवृद्धा धेरै प्रभावित हुने र युवाहरुलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ भन्ने अफवाह फैलिइरहेको […]
विश्वलाई त्रसित बनाउँदै गरेको कोरोना, कहाँ के हुँदैछ ?
काठमाडौं । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्रासले मुलुकहरु आक्रान्त बनेका छन् । कोरानोको प्रभावले मानिसहरुको मृत्यु मात्र भएको छैन ।